इमगुर २०१ 2014 मा ह्याक गरियो र उनीहरूले २०१ 2017 को अन्त्यमा पत्ता लगाए ग्याजेट समाचार
इमगुर विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय छवि पोर्टल हो। कम्पनी, जुन २०० in मा सिर्जना गरिएको हो, हरेक दिन छविहरूको प्रतिनिधित्व लाखौं कथाहरू संकलन गर्दछ। जहाँसम्म, सामान्य रूपमा भन्दा धेरै जसो केस हुन्छ, यो कम्पनी वर्षौं पहिले ठूलो ह्याक सामना गर्नुपर्‍यो "२०१ 2014 सटीक हुन।" र केहि दिन अघि मात्र उनीहरू कम्प्युटर आक्रमणको बारेमा सचेत भए।
कथा नोभेम्बर २ to मा फिर्ता जान्छ। कम्पनीले यसको मुख्यालयमा एक ईमेल प्राप्त गर्दछ र यो सीओओ (चीफ अपरेटिंग अफिसर) द्वारा पढिन्छ। यो तब हुन्छ जब चार्जमा व्यक्तिले यो बुझ्छ आक्रमण वर्षौं पहिले भोगीएको थियो र लाखौं प्रयोगकर्ता खाताहरूलाई प्रभावित गर्दै.
नोभेम्बर २ of को अपरान्ह, पृष्ठको लागि जिम्मेवार ट्रॉय हन्ट «म pwned गरिएको छ?Matter र यस प्रकारको वस्तुको एक विशेषज्ञले इ-मेलद्वारा कम्पनीलाई सतर्क गराउँछ। प्रतिक्रिया एकदम चाँडो थियो, को रूपमा यो सूचना इमगुरको सीओओ द्वारा पत्ता लगाइएको छ र बदलेमा उनले कम्पनीका संस्थापक र सीईओलाई सूचित गर्दछ.
अधिक जानकारी प्राप्त गर्न र ह्याकको हद पत्ता लगाउन उनीहरूले छिटो खोजीकर्तालाई सम्पर्क गरे। यो नोभेम्बर २ of को बिहान हो कि तिनीहरू यो निष्कर्षमा पुगे १.1,7 मिलियन प्रयोगकर्ता खाताहरू प्रभावित भएका छन्। अर्को शब्दमा, १.1,7 मिलियन प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड सम्झौता गरीएको छ।
चाँडै अगाडि बढ्नुहोस् म यी सबै खाताहरू रिसेट गर्दछु र प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पर्क गर्दछु इम्गुर सेवा पहुँच गर्नका लागि प्रभावित भयो कि उनीहरूको पासवर्ड परिवर्तन भयो। त्यस्तै कम्पनीले आफ्नै कर्पोरेट ब्लगमा भन्दछ कि प्रयोगकर्ताहरू कुनै पनि कुरादेखि डराउनु हुँदैन किनभने उनीहरूले संकलन गर्न सक्ने केवल डाटा ईमेल र नाम हुन्, यो मात्र यस्तो चीज हो जुन रजिस्ट्रीमा अनुरोध गरिएको छ।
यद्यपि अनुसन्धान अझै खुला छ, इग्गुरबाट नै उनीहरू शर्त लगाउँछन् कि उनीहरूको डाटाबेसमा घुसपैठ SHA-256 ईन्क्रिप्शनको कारण हुन सक्छ, हालसालका सब भन्दा प्रतिबद्धता मध्ये एक। जबकि पछिल्लो वर्ष २०१ 2016 यो अधिक शक्तिशाली ईन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्ममा अद्यावधिक गरिएको थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » इमगुर २०१ 2014 मा ह्याक गरियो र तिनीहरूले २०१ 2017 को अन्त्यमा फेला पारे